नयाँ मोबाइल खरिद गर्ने योजना छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस - Aarthiknews
नयाँ मोबाइल खरिद गर्ने योजना छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालको मोबाइल बजारमा विश्वमा पाइने अधिकांश मोबाइल फोन उपलब्ध छन् । हरेक महिनाजसो नेपालको मोबाइल बजारमा विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल आइरहेका छन् । यस अर्थमा नेपालको मोबाइल बजार विस्तार हुँदै गएको छ । कतिपय कम्पनीहरुको मोबाइलले लागतअनुसार राम्रो पर्फमेन्स दिएको पाइँदैन भने कतिपय कम्पनीको मोबाइल फोन खरिद गरेको लामो समय भसक्दा पनि राम्रोसँग काम गरिरहेका हुन्छन् । ग्राहकहरुले धेरै पैसा हालेर मोबाइल खरिद गर्दा हचुवाको भरमा भन्दा पनि मोबाइल बारेमा विस्तृत जानकारी लिन आवश्यक छ ।
यदी, तपाईसँग पर्याप्त पैसा छ भने चलेकै ब्रान्डको मोबाइल अलि धेरै रकम हालेर खरिद गर्दा फरक पर्दैन तर कतिपय चलेका कम्पनीहरुको मोबाइल पनि बजारमा आएर फ्लप खाएका छन् । त्यसैले हरेका मोबाइलको रिभ्यु हेर्नु जरुरी छ । रिभ्यु पनि सकेसम्म थर्ड पार्टी (उपभोक्ता) ले गरेको हेर्नुपर्छ । कम्पनीले गरेको रिभ्युमा आफ्नै सामानको तारिफ बढी हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध भइसकेका मोबाइल नेपाली बजारमा आउन केही बढी समय लाग्ने भएको कारण विदेशी प्रयोकर्ताले मोबाइलको बारेमा रिभ्यु लेखेका हुन्छन् । प्रयोग अवधिमा प्रयोगकर्ताको गुनासो बढी छ भने उक्त मोबाइल किन्न उपयुक्त हुँदैन । यस्ता किसिमका कमेन्टहरु इन्टरनेटमा, युट्युबमा सजिलै भेटिन्छन् । यदी, हामीले १०औं हजार रुपैयाँ हालेर मोबाइल खरिद गर्दैछौं भने केही समय इन्टरनेटमा मोबाइलको बारेमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।
खरिद गरेको मोबाइलले कम्पनीले ग्यारेन्टी/वारेन्टी दिएको अवधिसम्म काम गर्छ नै भन्ने हुँदैन । अझै त्योभन्दा पछिको समयमा मोबाइलमा समस्या सिर्जना भयो भने के गर्ने भन्नेबारे सोच्नु आवश्यक छ । पहिले बिलासीको सामानको रुपमा प्रयोग हुने मोबाइल आजको आवश्यकता भएको छ । मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न वस्तुका रुपमा रहेको मोबाइलले स्थान सुरक्षित गरेको छ । यो बिग्रिएको वा समस्या आएको अवस्थामा सम्पर्क विच्छेद हुँदा व्यवसायमा असर गर्ने, सम्बन्ध बिग्रिनेमात्रै होइन कतिपय अवस्थामा जीवननै खतरामा पर्न सक्छ । त्यसकारण भोलिका दिनमा मोबाइलमा कुनै समस्या आइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने पनि सोच्नु आवश्यक छ । युज एन्ड थ्रो मोबाइलले धेरै नोक्सानी पु¥याउनसक्छ । निकै साना समस्याले मोबाइललाई थन्क्याउनुभन्दा अलि बुझेर खरिद गर्ने कि !
नन ब्रान्डेड स्मार्ट फोन:
बजारमा आएका कतिपय नन ब्रान्डेड (नामनै नसुनेका कम्पनीको फोन) मोबाइलले ग्राहकहरुलाई झुक्याइरहेको अवस्था पनि छ । फोन खरिद गरेको केही समयसम्म राम्रो काम गर्ने तर समयक्रमसँगै फोनमा समस्या सिर्जना हुने गर्छ । यस्ता नन ब्रान्डेड मोबाइललाई ‘युज एन्ड थ्रो मोबाइल’ पनि भनिन्छ किनकी यो मोबाइलमा सानो–सानो समस्या आयो भने पनि त्यसको समाधान गर्ने सर्भिस सेन्टर छैन र रिपेयरिङ सामानको अभाव पनि छ । त्यसले गर्दा काम गरुन्जेलसम्म मोबाइल चलायो तर काम गर्न छोडेपछि उक्त मोबाइल फाल्नुको विकल्प हँुदैन ।
प्रायः जसो ननब्रान्डेड मोबाइलको आन्तरिक भण्डारण क्षमता समस्या हुन्छ । तुलनात्मक रुपले र्याम तथा प्रोसेसर अलि बढी भएता पनि यस्तो फोनमा स्टोरेज कम राख्नुको कारण प्रयोगकर्ताले धेरै मोबाइल एपहरु डाउनलोड गर्छ अनि मोबाइलमा बढी समस्या आइपर्छ भनेर हो । स्टोरेज थोरै हुनेबित्तिकै सीमित एपमात्रै स्टारेज गर्न सकिन्छ ।
अन्य के–के कुरामा ध्यान दिने
अपेरेटिङ सिस्टम (एन्ड्रोइड, आईओएस, विन्डो)
स्क्रिन साइजड्ड क्यामेरा (ब्याक तथा फ्रन्ट)
मोबाइलको भण्डारण क्षमता, आन्तरिक तथा बाह्य